Curtin University - Tacliinta Sare Abroad ee Australia
aasaasay : 1966
Ardayda (qiyaastii.) : 49000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Curtin
Qor at University Curtin
Curtin University (summad ah Curtin University of Technology) waa jaamacad ah cilmi dadweynaha Australia ku salaysan ee Bentley,Perth, Western Australia. Jaamacadda waxaa loo magacaabay ka dib markii Ra'iisul-wasaaraha 14-kii of Australia, John Curtin, oo waa jaamacadda ugu weyn ee Western Australia, iyadoo in ka badan 50,000 ardayda (sida 2014) meelo ay ka mid yihiin Perth, Margaret River, Kalgoorlie, Malaysia iyo Singapore.
Curtin waxaa la hadlay xaaladda jaamacad ka dib markii sharci oo uu soo ansixiyey Baarlamaanka Western Australia ee 1986. Tan iyo markaas, jaamacad la ballaariyo ay joogaan oo uu leeyahay xarumood ee Singapore iyo Sarawak. Waxay leedahay xiriir la leeyihiin 90 jaamacadaha sarrifka ee 20 dalalka. University ayaa wuxuu ka kooban yahay shan kulliyadood ugu weyn iyadoo in ka badan 95 xarumaha takhasuska. Jaamacadda ayaa hore u lahaa campus Sydney u dhexeeya 2005 & 2016. On 17 September 2015, Curtin University Council gaadhay go'aan ah in ay xirto Sydney campus by hore 2017.
University Curtin waa xubin ka mid ah Australia Technology Network (ATN), iyo waa firfircoon ee cilmi-baarista kala duwan ee beeraha tacliimeed iyo wax ku ool ah, oo ay ku jiraan Resources iyo Tamarta (tus, gaaska petroleum), Warfaafinta iyo Isgaarsiinta, Caafimaadka, Da'da iyo Well-qabka (Caafimaadka Dadweynaha), Communities iyo Agagaaraha Beddelidda, Koritaanka iyo Barwaaqada iyo Qoraal Creative.
Waa jaamacadda kaliya ee Western Australia si loo soo saaro qaataha PhD ee bilad dahab ah AINSE a, taas oo ah aqoonsiga ugu sareeya fiican cilmi baaris heer PhD ee Australia iyo New Zealand.
Curtin uu noqday firfircoon ee cilmi-baarista iyo wada shaqeyn dibada, gaar ahaan dhulweynaha China. Waxaa ku lug lahaa dhowr ah oo ganacsi, maamulka, iyo mashaariic cilmi-, gaar ahaan supercomputing, halkaas oo jaamacadda ka qayb diyaariyeen Tri-qaaradda la qanjidhada in Perth, Beijing, iyo Edinburgh. Western Australia ayaa noqday dhoofiye muhiim ah oo macdan, batroolka iyo gaaska dabiiciga ah. Shiinaha Wen Jiabao Premier booqday xarunta Woodside maal-galiso shidaalka cilmi mar uu booqday Australia ee 2005.
Xarunta Daraasaadka Aboriginal
School of Law Business iyo Taxation
School of Systems Information
School of Nursing, Umuliso iyo Paramedicine
School of Science Biomedical
School of Occupational Therapy iyo Work Social
School of Farmashiyaha
School of Science masaajka iyo Jimicsiga
School of Psychology iyo Pathology Hadalka
School of Deegaanka dhisay
School of Design iyo Art
School of Media, Dhaqanka iyo Farshaxanka Creative
School of Chemical Engineering iyo Petroleum
School of Engineering Farsamada Madaniga iyo
School of Electrical Engineering iyo barashada Kombiyuutarka
School Western Australian Macdanta
University Curtin la aasaasay 1966 sida Machadka Western Australian of Technology (SUGI). Its xuduntii kooban barnaamijyada jaamacadda ee Technical College Perth ee, kaas oo ka furmay 1900.
site University Curtin ee hadda ka jirta Bentley ayaa loo doortay in 1962, oo si rasmi ah u furay in 1966. The ardayda ugu horeeyay ee ku qoran sanadka soo socda.
In 1969, saddex hay'adaha ayaa ku biireen la sugaynaaye: Dugsiga Western Australian Macdanta (ka furmay 1902), Beeraha Muresk ka College (ka furmay 1926), iyo Dugsiyada ee masaajka iyo Occupational Therapy (hawlgalka tan iyo 1950 at Shenton Park). Inta u dhaxaysa 1966 iyo 1976 Sug soo maray ballaarinta ka 2,000 si ay u 10,000 ardayda.
Bishii December 1986 Machadka Western Australian of Technology (SUGI) waxaa laga dhigay jaamacad, hoos qodobada ugu WA Institute of Technology Sharciga Sixitaanka 1986. University Curtin ay magaca ka Ra'iisul Wasaarihii hore ee Australia qaaday, John Curtin. Curtin aqbalay ardayda ugu horeysay ee jaamacad 1987.
In 2005, Curtin iyo Murdoch University ayaa ku hawlan in daraasad ah oo wuxuu galay suurtagalnimada ee midowga a. Si kastaba ha ahaatee, on 7 November 2005, labada hay'adaha soo saaray war-saxaafadeed ku sheegay in midowga noocan oo kale ah aan doonaynin in la sameeyo.
In 2009, Curtin noqday jaamacadda ugu horeeyay ee Australian Technology Network in la qoran ciidmada ee Academic of Jaamacadaha World of jaamacadaha cilmi.
In 2010, Curtin hoos ku “of Technology” xarfaha, ka dibna ka hawlgala sida “Curtin University”. Magaca sharci weli University of Technology Curtin ilaa Act hoostiisa oo ay u hawlgasho wax laga beddelayo by Dowladda Australia Western.
Ma rabtaa wada hadlaan University Curtin ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Curtin on Map
Photos: Curtin University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Curtin
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Curtin.